Uyilo kunye neNdibano- iMestech Industrial Limited
Uyilo lweMveliso kunye neNdibano Yenza umjikelo opheleleyo wemveliso.
IMestech ineqela elinamava nelineengcali zeenjineli, ezinokuthi zikunike uyilo lweplastiki kunye nentsimbi yecomputer yabathengi, izixhobo zombane, izixhobo zonyango kunye nezinye iimveliso ngokweemfuno zakho, kunye nokwenza imodeli, ukuqinisekiswa kunye nokuphuculwa koyilo.
Sinikezela ngemveliso yoyilo kwezi zinto zilandelayo:
1. Uyilo loshishino kwimveliso entsha.
2. Uyilo lulonke nohlalutyo lokuba nokwenzeka kweemveliso ze-elektroniki kunye nezixhobo ezincinci zekhaya.
3. Iinkcukacha zoyilo lweeplastiki kunye nezixhobo zekhompyutha.
4. Umthengi uya kubonelela ngedatha yoqobo kunye neemfuno ezithile zokubonakala kunye nobungakanani bokuyilwa, kwaye abonelele ngemizobo ye-3D okanye ye-2D yamacandelo e-PCBA, amalungu kunye nezinye izinto ezinxulumene nembonakalo kunye nobungakanani bemveliso.
5. Yenza iiprototypes zibhekise kwimizobo yoyilo, kwaye uqinisekise uyilo kwaye ugqibelele uyilo. Kwaye uyibonise umthengi ukuze aqinisekise.
Abasebenzi bahlanganisa iimveliso
Uyilo lwemveliso ye-elektroniki
Uyilo lwemveliso yesilicone
Uyilo lwenxalenye yokufa
IMestech iseke inkqubo yemveliso epheleleyo kunye nonxibelelwano. Ngaphandle koyilo lwemveliso entsha, sinokubonelela abathengi ngeenkonzo zokuma endaweni enye kubandakanya ukuvelisa ukungunda, imveliso yamalungu kunye nokuthengwa kwempahla, indibano yemveliso, ukuvavanya, ukupakisha kunye nokuthuthwa kwempahla
1.Ukulungiswa kweplastikhi yokwenza izinto kunye nenxalenye yokubumba ngenaliti, ukuprinta kwesilika, ukucoca umbane
2. Metal iindawo processing
3. Ukuthengwa kwezinto zokubopha nezinye izinto ezongezelelweyo
4. Indibano yemveliso kunye nokuvavanywa.
5. Ukupakisha kwemveliso kunye nokuhambisa.
Ukuba unemveliso elungileyo kunye neqela labathengi, siyakuvuyela ukukunika uthotho lweenkonzo ukusuka kuyilo lwemveliso ukuya kwimveliso egqityiweyo.